Safarka Xalaal ee Kanada - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Marka loo eego Sahankii Qoyska ee Kanada ee 2011, waxaa ku sugnaa 1,053,945 Muslimiin Kanada ah, ama qiyaastii 3.2%, dadka, taas oo ka dhigaysa diinta Islaamka diinta labaad ee ugu weyn dalka ka dib diinta kiristaanka. Ee Weyn Toronto Aagga (GTA), 7.7% dadku waa Muslim, oo Weyn Montreal, 6% dadka waa Muslim. Inta badan dadka muslimiinta Kanada waxay raacaan Islaamka Sunniga ah, halka tiro aad u tiro yar ay u hoggaansamaan laamaha Shiicada iyo Ahmadiyya. Waqtigaan la joogo, Islaamku waa diinta ugu koritaanka badan Kanada.
Inta badan Muslimiinta Kanada waxay ku nool yihiin gobollada Ontario iyo Quebec. Marka loo eego Sahankii Qoyska ee 2011, waxaa ku noolaa 424,925 Muslimiin ah Weyn Toronto Bedka u dhigma 7.7% wadarta guud ee dadweynaha caasimadda. Waxay ka kooban tahay dad gaar ahaan tiro aad u tiro badan oo Muslimiin ah oo ka soo jeeda Baakistaan, Bangaladheesh, Hindi, Iiraaniyiin iyo Masaari / Carab. Ka weyn MontrealBulshada muslimiintu waxay ahayd 221,040 Sannadkii 2011 ama ku dhowaad 6% wadarta guud ee dadweynaha caasimadda oo ay ku jiraan dad aad u tiro badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid Galbeedka / Koonfurta Yurub, Kariibiyaanka, Waqooyiga Afrika, Bariga Dhexe, iyo qaaradaha Hindiya. Magaalada caasimada u ah Kanada ee Ottawa waxay marti galisaa dad badan oo Lubnaan, Koofurta Aasiya iyo Muslimiin Soomaali ah, halkaas oo bulshada muslimiinta ah ay tiradoodu gaaraysay 65,880 ama 5.5% sanadkii 2011. Marka lagu daro Toronto, Ottawa iyo Montreal, ku dhowaad dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Kanada waxaa ku nool bulsho Muslim ah, oo ay ku jiraan Vancouver (73,215), halka in kabadan seddex meelood meel ay kasoo jeedaan Iran, Calgary (58,310), Edmonton (46,125), Windsor (15,575), Winnipeg (11,265), iyo Halifax (7,540). Sanadihii la soo dhaafay, waxaa si xawli ah u kordhayay Calgary iyo Edmonton dhaqaalaha soo kordhay awgood.
Inta badan muslimiinta reer Kanada waa dad Muslimiin lagu soo barbaariyey. Sida soo galootiga guud ahaan, soo galootiga muslimiinta ah waxay Kanada u yimaadeen sababao kala duwan awgood. Kuwaas waxaa ka mid ah tacliinta sare, amniga, shaqada, iyo mideynta qoysaska. Qaar kale waxay u yimaadeen xorriyadda diinta iyo siyaasadda, iyo nabadgelyada iyo amniga, iyagoo ka tagay dagaallo sokeeye, cadaadis, iyo noocyo kale oo dagaal sokeeye iyo isir. 1980-yadii, Kanada waxay u noqotay meel muhiim ah oo ay ku magan galaan kuwa ka cararaya Dagaalkii Sokeeye ee Lubnaan. Sagaashameeyadii waxaa la arkay Muslimiin Soomaaliyeed oo yimid wixii ka dambeeyay Dagaalkii Sokeeye ee Soomaaliya iyo sidoo kale Bosniaks oo ka soo cararay burburka Yugoslavia-tii hore. Si kastaba ha noqotee Kanada wali ma helin tiro muhiim ah oo reer Ciraaq ah oo ka cararaya Dagaalkii Ciraaq. Laakiin guud ahaan ku dhowaad waddan kasta oo Muslim ah oo adduunka ku yaal ayaa u soo diray muhaajiriin Kanada - laga bilaabo Pakistan, Bosnia iyo Herzegovina iyo Albania ilaa Yemen iyo Bangladesh.
Heerka bacriminta ee Muslimiinta Kanada wuxuu ka sarreeyaa kan kale ee Kanada (celcelis ahaan 2.4 carruur ah haweenkiiba haweenkii Muslimiinta 2001, marka la barbar dhigo 1.6 carruur ah haweenkiiba haween kale).
Waxaa jira makhaayado badan oo Xalaal / Zabihah kuyaal Kanada oo dhan, inbadanna waxay ku yaalliin Weyn Toronto Aagga. Gudaha Toronto kaligaa, waxaa jira in kabadan 400 oo makhaayado Xalaal / Zabihah ah
Ra'yi ururintii deegaanka 2016, 83% Muslimiinta waxay "aad ugu faaneen" inay yihiin Canadian, marka la barbardhigo 73% dadka reer Canada ee aan muslimka ahayn oo wax la mid ah sheegay. Muslimiinta Kanadiyaanka ahi waxay soo wariyeen "Xoriyada Kanada iyo dimuqraadiyada" inay tahay isha ugu weyn ee lagu faani karo, iyo "dhaqamada kaladuwan iyo kala duwanaanta" inay tahay tan labaad ee ugu weyn. 94% muslimiinta Kanadiyaanka ah waxay soo wariyeen "xoog" ama "aad u xoog badan" dareenka lahaanshaha Kanada. 48% muslimiinta Kanada waxay aadaan masaajidka ugu yaraan usbuucii. 53% haweenku waxay xirtaan nooc madaxa ah oo ay dadka ku daboolaan (48% waxay xirtaan xijaabka, 3% waxay xirtaan jajabka halka 2% ay xirtaan niqaabka). Kibir ahaanta kanadiyaan ahaanta iyo lahaanshaha dareen xoogan oo lahaansho ayaa kusoo kordhay muslimiinta Canadian-ka ah marka la barbar dhigo sahanka 2006. Imaanshaha masaajidka iyo xirista madaxa dadweynaha dhexdeeda ayaa sidoo kale kordhay tan iyo sahankii 2006.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Kanada